Aboorka inta aanu kugu tufin ayaa lagu Tufaa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aboorka inta aanu kugu tufin ayaa lagu Tufaa
waxaan xusuustay maanta maah maahdan markaan aqriyay qoraal cusub oo la soo gaarsiiyay warbaahinta kaasoo lagu sheegay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii Golaha Shacabka JFS ay hiray ugusoo gudbiyeen ee ku aaddanaa Matalaadda uu Gobolka Banaadir ku yeelanayo Golaha Aqalka Sare.
Tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa imaneysa ayada oo dood xooggan ay ka taagan doorashada dalka, waxaana suurta gal in arrintan ay sii kordhiso muranka doorashada, maadaama Puntland iyo Jubaland ay horey u sheegeen in gobolka Banaadir uu xaq uleeyahay matalaad balse ay ubaahan tahay in loo maro wado sax ah oo dastuuri ah.
Saxiixa madaxweynaha uu ku soo beegay maanta ayaa umuuqata mid ku abuuri karta caqabad cusub shirka loo bala san yahay 30ka bishaan, iyadoo muhiimadiisu ahayd in lagu xaliyo sadex arimood oo kala ah.
1:Arinta Gobolka Gedo.
3:Arinta gudiyada Somaliland ee ay isku haystaan Cabdi xaashi iyo mahdi guuleed.
Hadaba Villa Soomaaliya ayaa doonaysa inay furto aag cusub si Beesha Caalamku ay ugu mashquusho arintan,
maadaama ay Beesha caalamku ka hortimid rabitaankii Madaxda dawlada federaalka ee ahaa in doorasho laga qabto maamulada ogol kuwa diidana aan loojoojin.
Maamulada iyo Siyaasiyiinta kasoo horjeeday qorshihii Villa Somaaliya ayaa umuuqday saacadihii ugu danbeeyay kuwo kaga adkaaday madaxda dfs loolankii taagnaa, maadaama ay umuuqatay aragtidooda in laqaatay lana qabanayo shir wada tashi ah oo lagu soo af-jarayo muranka taagan.
Madaxda Villa Somaliya waxay ciyaarta ku soo dareen qorshe kale oo ay mucaaradku u arki doonaan in 13ka xubnood ee gobolka Banaadir laga siinayo Aqalka sare la doonayo in lagu soo saaro Xildhibaano saaxiib la ah Villa Somalia oo codkooda siin doona Madaxweyne Farmaajo.
Hadaba Waxgaradka Soomaaliyeed ee u damqanaya dalka waxay ar kaan in tani u egtahay maahmaahdii Soomaaliyeed ee oranaysay.
(Aboorku inta aanu kugu tufin ayaa lagu tufaa.)
Ugudanbeyn waxaan arkaa in talada doorashada Soomaaliya ay si buuxda gacanta ugu dhigi doonaan Saaxiibada Beesha Caalamka maadaama dawladii Soomaaliyeed ay ku fashilantay isu soo dhawaynta dhinacyada is ku haya doorashada dalka, taasoo dalka ukeenaysa dibu dhac.
Previous articleKaftanka mourinho vs klopp kulanka caawa ee totenham vs liverbool
Next articleGudoomiye Cumar Finsh oo soo dhaweeyey 13 aqalka sare ee loogu daray gobolka Banaadir
Hoggaamiyeyaasha Afrika waxay muujiyeen naxdin iyo filan waa ku aadan geeridii ku timid madaxweynihii Chad Idriss Déby oo la toogtay markii uu wajahayay...
Ku Gudoomiyaha Gobalka Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar...
Dolwadda Jabuuti oo dhisanaysa garoon diyaaradeed oo ka mid noqon doona...